Fihetsiky ny SMM : Nanambany ny mpitsabon’ny Hjra -
AccueilRaharaham-pirenenaFihetsiky ny SMM : Nanambany ny mpitsabon’ny Hjra
11/04/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Zary toa manambany ny asan’ny mpitsabo indray. Izay no zava-misy ankehitriny ataon’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara na ny SMM.
Araka ny efa fantatra mantsy, nahazo taratasy fahazoan-dalana manokana fanarahana fitsaboana any ivelany Ramatoa Claudine Razaimamonjy. Vantany vao nahare sy naheno izany anefa ny Sendikan’ny Mpitsara, nandefa solontena teny amin’ny Hopitaly HJRA nitazonana an-dRamatoa Claudine Razaimamonjy, izy ireo omaly maraina. Tamin’izany indrindra no nitakiany tamin’ireo mpitsabo ny taratasy misy sonia nahafahana namoaka an’io olona tompon’ny Hotel A&C notanana sy nanaraka fitsaboana tao. Notoherin’ny HJRA kosa io fitakiana nataon’ny Sendikan’ny Mpitsara io satria tsy zon’izy ireo velively ny mitaky izany eny amin’ny Hopitaly.
Araka izany, efa mihoatra ny maha sendika azy ireo iny fihetsika nataony teny amin’ny HJRA iny. Fa alalana avy aiza ary lalàna avy aiza no ahafahan’ny sendika toa ny SMM mitsabaka amin’ny raharahan’ny hopitaly? Efa azo lazaina fa fihoram-pefy ireny fihetsiky ny SMM teny amin’ny HJRA ireny. Raha ny marina sy ny tokony ho izy, tsy anjaran’ny SMM velively ny manenjika olona eny amin’ny hopitaly. Ny hany andraikitr’izy ireo sy ny adidiny amin’ny maha sendika azy ny mitaky sy miaro ny zon’ny mpikambana, sns.
Noho izany manambany ary manao tsinontsinona ny asan’ny mpitsabo sy ny hopitaly ny fihetsika tsy mendrika nataon’ny SMM, omaly. Tsiahivina mantsy fa izy ireo indray no manontany sy mitaky ny antontan-taratasy nahafahan’i Claudine Razaimamonjy mitsabo tena any ivelany. Toa lasa miditra amin’ny andraikitra tsy tokony hidirany ny SMM. Ary tsy izy ireo akory no tokony hanao ny fanadihadiana lalina mahakasika izany fa avy amin’ny Tonia mpampanoa lalàna no afaka manokatra sy manome alalana ny fanaovana izany. Noho izany, tokony hanaja ny rafitra sy ny fitsipika misy ny SMM fa tsy izy ireo indray no handika lalàna sy hanao fihoaram-pefy.
Mampiavaka ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ireo filoha teo aloha toa an-dry Rajoelina sy Ravalomanana, dia noho izy tsy mba nanenjika ny tsy mitovy firehana aminy. Tsy mba filoha lian-drà sy tia valifaty ity filoha Hery ...Tohiny
Andriatsarafara Rakotondrazaka : Tontosa ny fifamindram-pibaikoana